Simeone Oo Wacdaro Ku Dhigay Juventus Kulan Genoa Dhulka Jiid-jiiday
HomeWararka MaantaSimeone Oo Wacdaro Ku Dhigay Juventus Kulan Genoa Dhulka Jiid-jiiday
27/11/2016 Abdiwahab Ahmed
Giovanni Simeone ayaa laba gool oo daran doori ah xili horeba ka xareeyey Juventus, kooxdiisana guul qiimo badan ugu horseeday, ciyaar horyaalka Seria A ku tirsan oo labada kooxood ku dhex martay garoonka Genoa.
Kubadda cagta – Genoa v Juventus – Italian Serie A – garoonka Luigi Ferraris stadium, Genoa, Italy – 27/11/16 – laacibka Genoa ee Lucas Ocampos iyo Giovanni Simeone oo dabaal deg samaynaya dhamaadkii ciyaarta. REUTERS/Alessandro Garofalo
Juve ayaa la gil-gilay jihadana laga lumiyey qaybtii hore ee ciyaarta oo lagu kala nastay 3-0 laga dhaliyey 29 kii daqiiqo ee ciyarta furitaanka u ahaaba.
Simeone, oo ah wiilka uu dhalay tabobaraha Atletico Madrid – Diego, ayaa daqiiqadii saddexaadba goolka furitaanka saxeexay, ka hor intii aanu wax yar kadib kii labaad daba marinin goolwade Gianluigi Buffon. Alex Sandro goolkii uu iska dhaliyey ayaa ciyaarta guusheeda sii calaamadiyey.
Juve waxay ciyaarta ku dhamaysatay 10 ciyaaryahan, kadib markii uu ka dhaawacmay, ciyaartana laga saaray Dani Alves xili bedelkii dhamaaday, ka hor intii aanu Miralem Pjanic goolka madiga ah xili dambe u saxeexin naadiga horyaalka difaacanaya.
Arsenal Oo Cudud Ku Muquunisay Sutton United Iyo Walcott Oo Dhaliyey Goolkiisii 100-aad
21/02/2017 Abdiwahab Ahmed
Daawo: Dallas Mavericks Oo Garaacday New York Knick
26/01/2017 Abdiwahab Ahmed
Tottenham 4-1 Liverpool – All Goals & Extended Highlights